Iindaba-Kutheni le nto ukhetha iPlywood yethu ejongene neplywood kunye ne-LVL Scaffold Plank?
1, Ifilimu ejongene neplywoodayisindi, iyamelana nokuhlaselwa ngumhlwa kunye namanzi, idityaniswa ngokulula nezinye izinto kwaye kulula ukuyicoca nokusika. Ukunyanga ifilimu ejongene nemiphetho yeplywood ngepeyinti engenamanzi iyenza ukuba ibe namandla kakhulu emanzini kwaye inxibe. Ngenxa yokuqina kwayo kunye nomphezulu ophathwayo ngokulula inokusetyenziswa kwindawo evulekileyo kulwakhiwo nasekwakhiweni.
Ukwaleka ifilimu ejongene neplywood kunye nomgangatho ophezulu wokungenisa iifilimu kuqinisekisa ubunzima kunye nokuchasana nokonakaliswa.
Umphezulu wefilimu ejongene neplywood ucocekile kwaye uyamelana nezicoci ezinamandla.
Ingasetyenziswa kwiimeko zokuhla kweqondo lobushushu eliphezulu, ifuthe lokufuma, ukucoca isepha kunye nokubonelela ngokhuseleko kwiintubi
Sinikezela ngeentlobo ezimbini zefilimu ejongene neplywood. Ifilimu yokuqala ye-birch ejongene neplywood enganyangekiyo emanzini, kulula ukuyicoca kunye nokusika kwaye yenye yezona plywood zisemgangathweni. Olu hlobo lweplywood lukwanokucoceka kwaye lusikwe kwaye lithambile kwaye likhaphukhaphu kune-birch film ejongene neplywood.
2, Izinto: Ulwakhiwo lomthi weplate ye-veneer (LVL)
Imigangatho: AS / NZS 4357 Ulwakhiwo laminated veneer maplanga GB / T 20241- 2006 Imigangatho yemiqadi yokuhombisa i-ANSI A10.8 - 2001, iimfuno zoKhuseleko ze-OSHA, Ukhuseleko eMsebenzini kunye noLawulo lwezeMpilo, iSebe lezabaSebenzi lase-US, imimiselo (imiGangatho - Ukucaciswa kwe-Scaffold ye-29 CFR) -I-1926 Subpart L, Isihlomelo A BS 2482 Ukucaciswa kweeBhodi zeTaff Scaffold
Elula kwaye yomelele (lelona phepha leplanga le-scaffolding elilelona liphantsi emarikeni), iplanga lokukhuphela lizinzile ngokulinganayo kwaye liyabiza. Ukuphuculwa kokuphambuka kwamaxabiso kuvumela amanqanaba amakhulu okhuseleko kunye nokusilela okukhoyo ngeebhodi zomthi eziqinileyo. Akusekho bhendi yokuphela iyafuneka, ukunciphisa imiba yokulungiswa kunye nolondolozo.
Iipropathi zeLVL Scaffolding plank
1.Ukuqina okuzinzileyo kunye nokhuseleko (OSHA)
Ubungqongqo 2.Unrivalled, uzinzo kunye namandla
3. Kuqinisekiswe ukuba ubuncinci kabini ubude beemithi ezomeleleyo
I-4.10% ikhaphukhaphu kuneempawu ezifanayo zomthi oqinileyo
Akukho mabhendi okuphela kwesinyithi afunekayo
6.Akukho kulondolozo oluqhubekayo okanye ukulungiswa kokulungiswa okufunekayo
7.Iipropathi zokugquma zombane ezibalaseleyo
8 iipropati anti-bako kunye nemichiza
Izicelo kunye nezimvo:
Isetyenziswe endaweni yeebhodi zetsimbi okanye iiplanga eziqhelekileyo. I-LVL Scaffold planks ziyafikeleleka, zinzima kwaye zihlala ixesha elide, ngakumbi kwiindawo ezinobungozi. Ukufakwa uphawu kwe-emulsion ekugqibeleni kunciphisa ukufuma. Amaplanga afunyenwe kumasimi aqinisekisiweyo e-FSC oko kuthetha ukuba azinzileyo. I-LVL Scaffold planks yomelele kwaye inexesha elide kakhulu, ikwakhaphukhaphu kwaye kulula ukuyiphatha.
Igumbi 3-135, Jushan Road, Donghu Street, Pizhou City, Jiangsu kwiPhondo, China